192.168.8.1 - Dzorerazve yako Router kune Default Zvirongwa
Unogona kuda Dzorerazve yako Router kuDefault Zvirongwa kana iwe usingakwanise kurangarira iyo admin password, haugone kurangarira isina waya network chengetedzo bhatani, kana iwe uri kunetsekana kubatanidza kunetseka.
Maitiro ari pazasi haana kuita sekutangazve modem kana router.
Yakasiyana Router Reset maitiro - Yakaoma, yakapfava, Simba Bhasikoro kuratidzira
Nzira dzakanakisa dzekumisazve maRouters
Dzakasiyana nzira dzekumisikidza nzira dzinogona kushandiswa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Kazhinji inokurudzirwa yakaoma resets, nyoro resets uye simba kuchovha.
Maitiro Ekumisazve Yako Router ku Zvirongwa Zvakasarudzika
Kugadzirisazve kwakaomarara ndiyo yakanyanya kuomarara mhando ye router reset & inowanzo shandiswa nepo admin yatadza kuyeuka makiyi kana password & zvishuwo zvekutangazve nezvirongwa zvitsva.
Kuomesa patsva hakudzosere kana kubvisa izvo zviripo-zvakaiswa router firmware vhezheni. Kuti udzivise matambudziko ekubatana kweinternet, bvisa modem yebandband ine router usati waita reset rakaoma.
Kuti uite zvakaoma reset:
Chinja pane iyo router, ishandure kune iro divi rine iyo Reset kiyi. Iyo Reset kiyi ingave iri pasi kana kumashure.
Iine imwe miniti & yakapinza, senge mazino, akabata iyo Reet kiyi kwemasekondi makumi matatu.
Sunungura iyo Reset kiyi & mirira makumi matatu masekondi kuti iyo router itangezve zvizere & simba zvakare.
Iyo yekutsiva nzira ndeye yakaoma reset 30-30-30 kuraira iyo inosanganisira kusundidzira iyo Reset kiyi yemakumi mapfumbamwe secs pane makumi matatu & inogona kuyedzwa kana main30-secondstypedoes isingashande.
Vagadziri ve router vanoverengeka vanogona kuve nenzira yakanaka yekumisazve iyo router, uye mamwe maitire ekuti reset reset anogona kunge achisiyana pakati pemamodeli.
Dzima & chinja simba re router inozivikanwa sesimba kuchovha. Iyo inoshandiswa kudzokazve kubva kumatambudziko anokonzeresa kuti router idonhedze kubatana semuenzaniso kukuvadza kune yeyuniti ndangariro yemukati kana kupisa. Simba macircuit haabvise mapassword akachengetedzwa, mamwe marongero akachengetedzwa kana makiyi ekuchengetedza, iine dhibhodhi ye router
Kumagetsi kutenderera iyo router:
Bvisa simba reruta. Bvisa zvakare bhatani reMagetsi kana bvisa plug yemagetsi.
Bvisa bhatiri pamabhatiri ane simba-bhatiri.
Vanhu vazhinji vanomirira makumi matatu masekondi kubva mukuita; zvakadaro hazvidiwe kumirira kupfuura mamwe masekondi pakati pekubvisa & kuisazve iyo plug simba remagetsi. Asi neyakaomarara resets, kuti itangezve kushanda iyo router inotora nguva kana simba radzoserwa.
Ipo ichinetsa kugadzirisa kubatanidza internet kunetsekana, zvinogona kubatsira kuseta zvakare chinongedzo pakati pemodemu & router. Izvi zvinogona kungosanganisira kuvhara kubatana kwepanyama pakati pezviviri, kusadzora software kana kumira simba.
Zvichienzaniswa nemamwe marudzi eseti, zvinyoro resets zvinotanga kushanda nekukasira sezvo ivo vasingade iyo router kuti itangezve.
Kuti uite nyoro reset, tambanudza tambo inosanganisa iyo router kune modem, wozobatanidza zvakare mushure menguva yakati. Ma routers mashoma anogona kunge aine nzira isina kujairika yekugadzirisa zvakapfava:
Tsvaga Disiki / Batanidza kiyi pane iyo dashboard. Izvi zvinogadzirisa chinongedzo pakati peanopa sevhisi & modem.